Mandrora mitsilany | NewsMada
Par Taratra sur 08/02/2019
Iza ny tsy vaky vava nanoloana ny fiakaran’ny rano teto an-dRenivohitra, omaly, nandritra iny orambe iny. Teny Analakely, Antanimena, Anosy… tsy lazaina intsony ny teny Besarety, niakatra hatreny am-balahana ny ranobe. Difotra ny fiara iva rehetra, maro ny maty tao anaty rano ny fiara sy ny moto.
Inona moa ny nahatonga iny fiakaran’ny ranobe iny fa noho ny tsy fisian’ny fivarinan-drano intsony eto Antananarivo. Maro ny tatatra tsentsin’ny fako, eo ihany koa ireo mpanototra tany ananganana trano amin’ireo faritra nahitana tanimbary sy tanin’anandrano teo aloha. Mihena ny toerana mety hivarinan’ny rano eto an-dRenivohitra ka tsy mahagaga raha miakatra toy izao ny rano.
Ity ny hoe mandrora mitsiny lany aminy. Tsy ampy fanabeazana ve ny mponina sa mafy loha ka tsy mahalala fa mety hitera-doza ny fanariana fako eny rehetra eny ka hanentsina ny tatatra? Toy izany koa ny tompon’andraikitra manome alalana ny sasany hanototra tany sy hanangana tranobe kanefa tsy manara-penitra ny fivarinan-drano, sns?
Izao mitanty ny vokany ny rehetra. Ankoatra ny vatobe mandodona ny tanàna sasany, mandodona koa ny loza amin’ny tondradrano. Azo heverina fa hitera-doza koa ity farany, ny aretina, sns.
Miandry izay fepetra raisin’ny manampahefana manoloana izao loza mitatao izao. Na izany aza, tsy hiandry lava izao kosa ny vahoaka fa mandray andraikitra avy hatrany. Manadio ny eny aminy, misava ny tatatra, tsy manipy fako eny rehetra eny. Indrindra ireo mpivarotra amoron-dalana, ny mpivarotra hani-masaka manerana ny tanàna ireo. Andrasana amin’ny fitondrana ireo mpanototra tany, sns, inona ny atao amin’ireo?
Mamono tena isika, tsy manaja ny tontolo iainana, ny manodidina, tia miaina anaty loto. Izao ny vokany ka mila ampiasaina ilay teny hoe: “Rehefa tsy mandoto dia efa manadio”.